जेष्ठ २ गते शुक्रबार ई. सं. २०२० मे को राशिफल – SwissNepal.com
अशुभ समाचारको आगमनले मनमा उदासी छाउने छ । मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुनेछ । गरेका काममा छिट्टै सफलता प्राप्त नहुँदा दिक्क लाग्नेछ । खर्चालु समय छ, चिताउँदै नचिताएको कुनै क्षेत्रमा खर्च बढ्ने सम्भावना छ । सामाजिक सभासमारोहमा सहभागी बन्नुपर्ने भएकाले गर्नैपर्ने कुनै काममा अवरोध हुनसक्छ । गृहिणीहरूका लागि घरायसी वातावरणसमेत निराशापूर्ण हुनेछ, पुरानो लेनदेन वा प्रशासनिक झमेलाले पिरोल्न सक्छ । खानपिनको समयमा पनि हेरफेर हुने समय छ । शरीरमा आलस्य र थकानको अनुभूति हुनेछ । गरेका काममा सोचेबमोजिम साथसहयोग वा सद्भाव मिल्न कठिन छ । साथीभाइ टाढिने दिन हो, छात्रछात्राले मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा ध्यान दिनाले पठनपाठन बिथोलिने समय छ ।
शुभरङ्ग स् कालो
शुभअङ्क स् ३
शुभदिशा स् पश्चिम
इष्टदेवता स् सरस्वती माता
अशुभ रङ्ग स् घिउरङ्गरक्रिम
अशुभ अङ्क स् ६
अशुभ दिशा स् दक्षिण
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ नीलसरस्वत्यै नमः
न्यूनतम जापसङ्ख्या स् २३
के गर्ने स् छोराछोरीको उन्नतिरप्रगतिको जानकारी लिने
के नगर्ने स् ठूलाबडा र मान्यजनको बेवास्ता
स्वास्थ्यस्थिति राम्रो रहनुका साथै काम गर्ने जाँगर बढ्ने छ । गृहिणीहरूको पारिवारिक सुखसम्मृद्धिमा बृद्धि हुनेछ । काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नुका साथै उन्नति गर्ने अवसर प्राप्त हुने योग छ । नवीन रोजगारीको सम्भावना छ । छात्रछात्रा प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा सफल हुनेछन् । धैर्यधारण गरी परिश्रम गर्ने दिन हो । मातापिता र अभिभावकवर्गको स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । कर्मचारीले हाकिमबाट महत्वपूर्ण कुरा फुत्काउन सक्छन् । ठूलाबडाको सहयोग र सल्लाहले राम्रो फाइदा लिन सकिने छ । सन्तानपक्षबाट राम्रै सरसहयोग प्राप्त हुनेछ । व्यापाररव्यवसायमा सोचेजति लाभ पाइने छ । आफ्नो क्षेत्रमा साख रहनेछ ।
शुभरङ्ग स् ध्वाँसे
शुभअङ्क स् ६
शुभदिशा स् दक्षिण
इष्टदेवता स् महालक्ष्मी
अशुभ रङ्ग स् कलेजी
अशुभ अङ्क स् ५
अशुभ दिशा स् पूर्व
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ भूमिदेव्यै नमः
के गर्ने स् हाकिम, मान्यजन र पिताका चाहना बुझ्ने
के नगर्ने स् लोभ र मोह
आज गृहिणीहरूले परोपकारी काममा खट्नु पर्ने दिन छ । दान, पुण्यका कार्यमा आकर्षण बढ्ने छ । पर्यटकीय स्थल, तीर्थ वा मन्दिरको भ्रमण हुनसक्छ । विद्यार्थीहरूले ज्ञानगुन र बौद्धिक क्षेत्रमा गरेको प्रयास सफल हुनेछ । बन्दव्यापार फस्टाउने छ । आम्दानीमा कमी हुने छैन । सानो प्रयासले रोकिएको काम बन्नेछ । पारमार्थिक काममा खट्नु पर्ने समय छ । धार्मिकरसामाजिक क्षेत्रमा समय दिन सकिन्छ । तर्कवितर्क र प्रतिस्पर्धामा विजयी भइने छ । घरपरिवारमा सुमधुर वातावरण सिर्जना हुनेछ । साथीभाइले सकेको सहयोग गर्नेछन् । प्रेम र प्रणयप्रसङ्गका लागि पनि समय अनुकूल छ । सानो प्रयासले भाग्यबल बृद्धि गर्न सकिने दिन छ ।
शुभरङ्ग स् सेतो वा पहेंलो
शुभअङ्क स् ५
शुभदिशा स् पूर्व
इष्टदेवता स् कुलगुरुरशिवजी
अशुभ रङ्ग स् चम्किलोरउज्यालो
अशुभ अङ्क स् ४
अशुभ दिशा स् उत्तर
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ गुरवे नमः
न्यूनतम जापसङ्ख्या स् १९
के गर्ने स् बृद्धबृद्धा, असहाय र दीनहीन अवस्थाका व्यक्तिको सहयोग
के नगर्ने स् आडम्बर र ढोंगीपन
शुभअङ्क स् ८
शुभदिशा स् उत्तर
इष्टदेवता स् कालभैरव
अशुभ रङ्ग स् हरियो
अशुभ अङ्क स् ३
अशुभ दिशा स् पश्चिम
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ कालभैरवाय नमः
न्यूनतम जापसङ्ख्या स् १०
के गर्ने स् उत्ताउलोपन, चञ्चलता र हडबडीमा नियन्त्रण्
के नगर्ने स् असुरक्षित यात्रा
मन रोमान्टिक र भावुक बन्नेछ । रमझम र मनोरञ्जनमा आकर्षण बढ्न सक्छ । आज प्रायः सबैको घुमघाम, भेटघाट र मनोरञ्जनमा दिन बित्नेछ । मेजमानीको अनुकूलता प्राप्त हुनेछ । दाम्पत्यसम्बन्ध सुखद रहनेछ । प्रेमको बन्धनमा बाँधिने बेला छ । परोपकारका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ । स्वास्थ्यस्थितिमा अनुकूलता आउनेछ । काम गर्न जाँगर चल्नेछ, उत्साहवद्र्धक समय छ, आम्दानी बढ्न सक्छ । दिन ढल्दै जाँदा जिम्मेबारीबोध बढ्दै जानेछ, रामरमाइलो त्यागेर व्यवसायिक गतिविधिमा संलग्न हुन मन लाग्नेछ । आम्दानीका दृष्टिले नराम्रो छैन, तर विलासिताका क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्छ । छात्रछात्रा रामरमाइलोमा भुलिने समय छ ।
शुभरङ्ग स् गुलाबी वा सिन्दूरे
शुभअङ्क स् ७
इष्टदेवता स् शिवर्पावती
अशुभ रङ्ग स् पहेंलो
अशुभ अङ्क स् २
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ गृहलक्ष्म्यै नमः
न्यूनतम जापसङ्ख्या स् ११
के गर्ने स् परिवारमा अधिकतम समय दिने
के नगर्ने स् ख्यालठट्टा र जिस्क्याउने काम
शुभरङ्ग स् हलुका सेतो
इष्टदेवता स् भगवान् शङ्कर
अशुभ रङ्ग स् सुन्तलेरगुलाबी
अशुभ अङ्क स् १
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ रां राहवे नमः
न्यूनतम जापसङ्ख्या स् ०८
के गर्ने स् समस्या र सङ्कटर्लाइ सार्वजनिक गर्ने
के नगर्ने स् स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता
शुभरङ्ग स् हलुका नीलो वा हरियो
शुभअङ्क स् १
अशुभ रङ्ग स् कालो
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ सरस्वत्यै नमः
न्यूनतम जापसङ्ख्या स् ०७
के गर्ने स् सिर्जनात्मकता र रचनात्मकतामा जोड दिने
के नगर्ने स् बुद्धिको दुरुपयोग
शुभरङ्ग स् रातो वा पहेंलो
शुभअङ्क स् ४
इष्टदेवता स् भगवती दुर्गा
अशुभ रङ्ग स् गाढा नीलो
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ नमश्चण्डिकायै
के गर्ने स् पतिरपत्नी, प्रेमीरप्रेमिका वा छोराछोरीको चाहना पूरा गर्ने
के नगर्ने स् घरपरिवारका कुरामा बेवास्ता
शुभरङ्ग स् गाढा नीलो
इष्टदेवता स् गणेश
अशुभ रङ्ग स् गुलाबी वा सिन्दूरे
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ सिद्धिविनायकाय नमः
के गर्ने स् साथीभाइको सङ्गत र गफगाफमा नियन्त्रण
के नगर्ने स् घमण्ड
शुभरङ्ग स् घिउ रङ
शुभअङ्क स् २
इष्टदेवता स् लक्ष्मी माता
अशुभ अङ्क स् ९
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ महालक्ष्म्यै नमः
के गर्ने स् सुमधुर बोलीवचनको प्रयोग गर्ने
के नगर्ने स् अनावश्यक खानपान
शुभरङ्ग स् सिन्दूरे रातो
शुभअङ्क स् ९
इष्टदेवता स् हनुमान्
अशुभ अङ्क स् ८
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ हं हनुमते नमः
के गर्ने स् निर्णय गर्दा राम्ररी सोचविचार गर्ने
के नगर्ने स् हडबड र शीघ्रता
शुभरङ्ग स् सेतो वा बैजनी
इष्टदेवता स् धर्मराज
अशुभ रङ्ग स् हरियोरचम्किलो
अशुभ अङ्क स् ७
कार्यसिद्धि मन्त्र स् ॐ चित्रगुप्ताय नमः
के गर्ने स् दान, धर्म, परोपकार
के नगर्ने स् रिसराग, उद्वेग र क्रोध
कोरोना संक्रमितको संख्या २४३ पुग्यो